Tinoita gainer pamba
Sports uye Fitness, Vaka mhasuro
Hazvina chakavanzika vatambi vakawanda varambe chitarisiko waivako zvinokubatai mitambo zvokuwedzera. Ndinofanira kutaura kuti hazvisi kemisitiri! Munyika mutambo kuratidza musiyano pakati makemikari uye zvinowedzera. Just zvakakwana kuverenga vaviri nyaya pamusoro chii uye sei unoshanda. Nhasi, marudzi mazhinji mitambo zvokudya hazvigoni kuitwa pamusha (semuenzaniso, creatine Tribulus). Asi pane kunze, uye sei gainer.
Gainer ari puroteni-carbohydrate muvhenganiswa ine vakawanda macalorie. drink Izvi zvinogona kunyange kuitwa pamba, kuva nenguva yayo dziripo dzimwe zvigadzirwa (izvo tichakurukura gare gare). Makabhohaidhiretsi zvinodiwa nomuviri kuti simba kugadzirwa, mapuroteni - kuvaka tsandanyama. Zvakanakisisa kutora gainer (pasinei iri musha kana akatenga) pashure muviri, pashure maminitsi anenge 30. Sei, zvamunokumbira. The ndechokuti panguva iyi hwomukova 'carbohydrate' bhokisi panguva MDM muviri unotanga achiwana zvose zvinovaka muviri pamwe kutsiva. Gainer pamusha (neunotengwa) ndiye akakodzera kuti kuzoita simba uye kuvaka tsandanyama panguva imwe chete.
Saka, kugadzwa uye tsanangudzo gainer tinonzwisisa. Zvino dzokai kusarudza zvinhu izvo zvinogona vakabika carbohydrate cocktaileja. Kusarudza kudiwa zvikuru, vachifungidzira kuti carbohydrate zviri musanganiswa anofanira kuva mukuru uwandu mapuroteni muna ka3. Ngatitange pamwe puroteni. Zviri pachena kuti coctail pamusoro nhindi yenyama zvatisingakwanisi kuita, zvakanaka akakodzera basa Curd. Low mafuta koteji chizi ndiyo yakanaka mapuroteni hwaro. Shure kwaizvozvo unofanira kuwedzera nekatatu chitsama makabhohaidhiretsi kuti kungoti zvakawandira nomuchero. Hazvibviri kuti kukanganisa - ivo huri upi muchero. Unogona kupindira mune gainer (kumba), zvose anouya mumaoko: maapuro, mapichisi, mabhanana, Pears, maranjisi uye zvichingodaro. Winter zvibereko kuti zvishoma zvokuvapfuura, uye mitengo nokusimuka yekudyidzana. Muchiitiko chino, ivo zvinobudirira kutsiva uchi uye Jam. Zvino, taisa akasarudza pakusikwa zvinyorwa gainer, endai gadziriro yayo.
Kuti vave nechokwadi kuti zvinoriumba zvose anobudiswa neZvapupu musanganiswa rinoita kuti muviri, vanofanira kuva kwazvo nokugedagedesa. Nokuti chinangwa ichi rakanakira blender. Zadza fruktiki kwedu zvose mukaka uye Curd (Rine mamiririta vanenge 400) uye kutanga nokusanganisa. Wana mukanyiwa wose wava homogeneous uye batana. Hapafanire kuramba chero nemavhinga uye nezvidimbu chikafu. Kana zvakaoma kuti gobvu musanganiswa, wedzera mamwe mukaka. The zvichiguma chinwiwa izere iri shaker. Saka, tine gainer mumba, izvo zvinozoita rinenge zvakanaka sezvo rwokutenga, uye dzimwe nguva kunyange runopfuura izvozvo. Chimwe chinokosha - regai kuita zvose nguva imwe coctail zvakafanana zvigadzirwa. Edza chinhu chitsva, kuedza nokusika vanofarira itsva vaiva kusiyana. The gainer akanaka kumba, sezvo chokwadi kuti chimwe chezvinonhuwira kuti chinwiwa zvinogona pasina zvinetso kubviswa kuchiiswa analogue.
How download chipfuva?
Mwaya nokuti zvakazorodza tsandanyama tsandanyama Relief: wongororo, zvinhu uye nemirayiridzo
Kuti abatsire beginners: sei zvikuru anogona pumped kana sei kuva muridzi akanaka mufananidzo nokukurumidza sezvingabvira?
A gainer akanaka - musha kubika
How kuvaka yenyu kusangana nekutsi kwemukadzi tsandanyama kuburikidza muviri?
Protein: kunokuvadza kana kwete vatambi uye vanoita kugwinya?
Celt - murwi mukuru
The Republic of France. Sarudzai guta wevatariri
Ndianiko waishandiswa munyori: mabasa, kurovedza, uye kunyanya basa
Nhoroondo yeLev Leshchenko: nzira yakaoma yevanyori
Lancia Delta - a-nguva matanhatu weNobel pakati Makontakta 'Championship WRC
Anti-café "White Rabbit" (dunhu Golyanovo): tsananguro, wongororo, mutengo
Chirongwa profitability indekisi iri negadziriro zviratidzi upfumi kunyatsoshanda.
Sei guta guru mvumo pamusoro LLC uye kusiyana kwayo saizi?
Gel Polish zhizha design: nhau, Photo
The yemaitiro kuti kubudirira Garik Martirosyan - kufarira Artist Biography
Cathedral of Santa Maria Del it fiore muFlorence: photo, akitekiti, mukati
Mashoko nezvevanyori hondo Russian. Quotations uye aphorisms pamusoro hondo